FAFAO TSY TAPAKA NY KAONTY GMAIL (MIARAKA AMIN'NY SARY) - MALEMY
Ahoana ny fomba hamafana ny kaonty Gmail tsy tapaka: Azonao atao ny mamafa ny anao Gmail kaonty maharitra nefa tsy mila mamafa ny kaonty Google anao manontolo, raha mbola afaka mampiasa serivisy Google hafa rehetra toa ny YouTube, Play, sns.
Izay tokony ho fantatrao momba ny fanesorana ny kaonty Gmail
Izay tokony hataonao alohan'ny hamafana ny kaonty Gmail anao
Ahoana ny fomba hamafana tsy tapaka ny kaonty Gmail
Hampidina ny mailaka anao:
1. Midira amin'ny Gmail ary sokafy ny kaonty Google-nao.
2. Kitiho ny ‘ Data sy personalization ’Fizarana eo ambanin'ny kaontinao.
3. Avy eo tsindrio ny ' Sintomy ny angonao '.
4. Safidio ny angona tianao alaina ary araho ny torolalana.
Hizaha ireo fampiharana an'ny antoko fahatelo mifandray amin'ny kaontinao Gmail:
1. Midira ao amin'ny Gmail ary mankanesa any amin'ny kaonty Google-nao.
2. Mandehana mankany amin'ny Sehatra fiarovana.
3. Kitiho midina hahita ' Fampiharana antoko fahatelo miaraka amin'ny fidirana kaonty '.
1. Midira ao amin'ny kaonty Gmail tianao hamafa .
2. Kitiho ny sarin'ny piraofilinao ary avy eo ' Kaonty Google ’Hanokatra ny kaonty google anao.
3. kitiho amin'ny ‘ Data sy personalization ’Avy amin'ny lisitra eo amin'ny ilany havia amin'ny pejy.
4. Soraty ilay pejy ka ' Misintona, mamafa, na manaova drafitra ho an'ny angon-drakitrao ’Sakana.
5. Ao amin'ity sakana ity, kitiho ny ‘ Fafao ny serivisy na ny kaontinao '.
6. Hisokatra pejy vaovao. Tsindrio ny ‘ Fafao ny serivisy Google '.
7. Hisokatra ny fisoratana anarana amin'ny Gmail. Midira ao amin'ny kaontinao ankehitriny indray.
8. hangataka fanamarinana izy io. Tsindrio ny Next to mandefasa kaody fanamarinana 6 isa amin'ny laharana findainao.
9. Ampidiro ny kaody ary tsindrio Manaraka.
10. Hahazo ny lisitry ny serivisy Google mifandraika amin'ny kaonty google anao.
iraika ambin'ny folo. Tsindrio ny sary masina (Delete) eo akaikin'ny Gmail. Hipoitra avy hatrany.
12. Ampidiro ny mailaka hafa, ankoatry ny Gmail misy anao ankehitriny hampiasa azy io amin'ny serivisy Google hafa amin'ny ho avy. Ho lasa solonanarana vaovao ho an'ny kaonty Google ianao.
Fanamarihana: Tsy afaka mampiasa adiresy Gmail hafa ianao ho toy ny mailaka hafa.
13. kitiho amin'ny ‘ Mandefasa mailaka fanamarinana ’Manamarina.
ny fomba fanaovana google haingana
14. Ianao handray mailaka avy amin'i Google amin'ny adiresy mailaka anao.
dimy ambin'ny folo. Mandehana any amin'ny rohy famafana omena amin'ny mailaka .
16. Mety mila miditra ao amin'ny kaonty Gmail-nao ianao ho fanamarinana.
17. Tsindrio ny ' Fafao ny Gmail ’Bokotra mankany hamafa mandrakizay ny kaonty Gmail.
Voafafa mandrakizay ny kaonty Gmail anao. Azonao atao ny miditra amin'ny kaonty Google anao sy ny serivisinao Google hafa amin'ny adiresy mailaka hafa nomenao.
Manantena aho fa nanampy ireo dingana etsy ambony ary afaka mora foana ianao izao Fafao tsy tapaka ny kaonty Gmail fa raha mbola manana fanontaniana momba an'ity fampianarana ity ianao dia aza misalasala manontany azy ireo ao amin'ny faritra maneho hevitra.
mpizara ftp amin'ny Windows 10
inona no dikan'izany rehefa diso ny mpanonta
mandresy kiraro 10 mankany amin'ny efijery mainty miaraka amin'ny cursor
maninona no tsy mandeha amin'ny youtube ny adblock